Fetin’ny Pentekosta: olona miisa 170 naiditra hopitaly, efatra namoy ny ainy | NewsMada
Fety tsy ialana loza! Miisa 170 ireo olona naiditra hopitaly raha efatra kosa namoy ny ainy, araka ny tatitra nampitain’ny mpitsabo ao amin’ny sampana vonjitaitra sy ny sampana famelomana aina ao amin’ny hopitaly HJRA, omaly…
Marihina fa hatramin’ny ora farany nanoratana io isa tonga eto am-pelatananay io fa mety mbola hitombo io isa anio alina (omaly io), araka ny fanazavana nomen’ny mpitsabo hatrany. Raha ho an’ny ao amin’ny sampana vonjitaitra, raha ny andron’ny Pentekosta, miisa 95 ireo olona nandalo fizahana teo amin’io sampana io ka naiditra hopitaly ny 14 amin’ireo satria mila fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman’izy ireo raha afaka nody avy hatrany kosa ny ambiny rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo. Ny ratra vokatry ny adiady sy ny lozam-piarakodia no tena betsaka tamin’ity satria mahatratra 52 ny antontanisa teo am-pelatanan’ireo mpitsabo miandry raharaha ao amin’ity sampana vonjitaitra ao amin’ny HJRA ity. Ankoatra ireo, teo koa ireo naratra vokatry ny fanafihana. Olona telo nandeha fiara R. Kangoo iray, tratran’ny lozam-piarakodia teny Amboditanimena Soavimasoandro. Naratra ireo olona telo (lehilahy roa sy vehivavy iray) tao anaty fiara. Lehilahy iray 52 koa, atahorana ny ainy satria voadonan’ny fiara teny Antohomadinika, omaly ihany koa.
Nitombo ireo mararin’ny toaka…
Ho an’ny tao amin’ny sampana famelomana aina kosa, ho an’ny asabotsy sy ny alahady teo, miisa roa ireo tratran’ny fanapoizinana ka lehilahy iray namono tena raha tratran’ny fanapoizinana sakafo kosa ny iray. Miisa 13 ireo olona nandalo fizahana tao amin’ity sampana iray ity ka olona telo tapaka lalandra. Ho an’ny alahady kosa, olona telo (lehilahy roa sy vehivavy iray), tsy nahatsiaro tena vokatry ny fisotroana toaka diso tafahoatra. Vehivavy miisa roa koa namono tena noho ny olana amin’ny fitiavana. Olona miisa 16 nandalo fizahana tao amin’ity sampana ity ka nisy ireo tsy maintsy notazonina tao amin’ny hopitaly raha afaka nody kosa ny ambiny rehefa nahazo fitsaboana. Misy fatin’olona efa maty tany ivelany no naterina tao amin’ny hopitaly. Azo lazaina fa nilamina ihany ny fety na teo aza ny fisian’ireo olona tsy mahafehy tena mandritra ny fety toy izao. Nanao ny asany hatrany ireo mpitandro filaminana na ireo nanara-maso teny am-piangonana na ireo teny amin’ny toerana fitsangantsangana sy teny an-dalana.